Well Wishes for Chairman Prof. Dr. Sein Myint's Birthday
Well Wishes for Chairman Prof. Dr. Sein Myint’s Birthday
Professor Dr. Sein Myint, Founder and Chairman of Supreme Group of Companies, celebrated his birthday on 2nd September 2020.
The Chairman is someone who has dedicated his whole life for the sake of the country, the citizens, and the engineering society. He has been involved in and held leadership positions in numerous international and local organizations. Please find more information about his contributions here.
Under the Chairman’s guidance, the Supreme Group of Companies and its Joint Ventures have contributed over 1 Billion MMK to health, education, and social sectors of the country, especially during emergencies such as Cyclone Nargis, nationwide floods, and the current COVID-19. With every project, there isagreat importance placed on Corporate Social Responsibility (CSR), and it is ensured that negative environmental and social impacts are reduced as much as possible.
This year, Supreme’s 18th Annual Blood Donation Drive was successfully held on the same day. Read more here.
၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် စူပရင်းကုမ္ပဏီ၏တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဌ ပါမောက္ခဒေါက်တာစိန်မြင့်၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာအားကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဥက္ကဌကြီးသည်နိုင်ငံ့အကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းများတွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအဖြစ် ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ့အကျိုး၊ ပြည်သူများအကျိုးနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ အကျိုးအတွက် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မြှုပ်နှံသယ်ပိုး ဦးဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ် ပါသည်။ ဥက္ကဌကြီး၏ဆောင်ရွက်ချက်များအား သိရှိနိုင်ရန်: https://supremegroupcompanies.com/board-of-directors/
နိုင်ငံအတွက် သာသနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ အသီးသီး၏ လိုအပ်မှုရှိသည့်နေရာများ၌ ဥက္ကဌကြီးဦးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများ၊ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း (၁၀၀၀၀) ကျော်ထည့်ဝင်၍ ပူးပေါင်း လှူဒါန်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် နာဂစ်ကာလ၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရေကြီးသည့်ကာလ၊ COVID-19 ကာလများ၌ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လက်တွဲပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာတိုင်း၌ CSR (Corporate Social Responsibility) ကဏ္ဍကို အထူးအလေးထားမြှင့်တင်ပြီး Environmental & Social Impact ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ရန် အဓိကထား ဂရုပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စူပရင်းဥက္ကဌကြီး၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာအဖြစ် စူပရင်းမိသားစု၏ (၁၈)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်း သွေးလှူဒါန်းပွဲကို မေတ္တာအခါတော်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်: https://supremegroupcompanies.com/supremes-18th-annual-blood-donation-drive/